DHIBCO YELLOW ON CALEEMAHA PEAR, AMA SIDA LOO TAKHALUSO MIRAYNTA - KU'SAABSAN
Sidee loo badbaadiyaa pear ka soo miraha?
Dhibaatada ka soo baxday fangasku waa mid si fiican u yaqaan dhammaan kuwa bannaanka u ah, kuwaas oo beerahooda pear ah nooc kasta oo koraya. Cudurkan ma aha oo kaliya muuqaalka muuqaalka geedka, laakiin sidoo kale dhaawici geedka. Maanta waxaannu ka hadli doonaa sida loo kala soocayo miraha ka soo jeeda cudurro kale, sida ay khatar u tahay, iyo sida loo daaweeyo.
Waa in isla markiiba la sheegaa in gumaystuhu yahay "hooyada" dhirta oo fangaska ay sameeyaan oo soo saaraan xanuunka. Gawaarida waxay ku faafaan meel fog, oo ay ku dhacdo isteroberi (warshad dhexdhexaad ah). Jeexjeexaha Juniper wuxuu ku kici karaa 40-50 kiiloomitir beertaada, khilaafyada ayaa weli ku dhici doona pear.
Waa muhiim! Marka laga soo tago dammaanad, caleemaha iyo miraha ayaa laga yaabaa inay saameeyaan qadhaadh, laakiin taasi waxay dhacdaa oo keliya marka ay timaado cudurrada faafa.
Hadda cudurka for laftiisa. Caleemaha geedaha ay saameeyeen waa la daboolay dhibco casaan leh jilicsanaan jaale ah. Waxay dhacdaa isla markiiba ka dib marka ubax, dhammaadka Abriil. Muddo ka dib, dhibco orange ah on caleemaha pear bilaabaan inay bararaan iyo deform, soo jeesto nooc ah koritaanka ama barar. Taas ka dib, taarikada ayaa saameysey.
Waa maxay cudurka halista ah
Cudurada kala duwan ee pear, hal ama hab kale, waxay saameeyaan dhalidda iyo difaaca jirka, laakiin dhibcaha "orange" ee caleemaha caleemaha kama dhigi karo oo keliya geedkii oo aan caleemo dhicin inta ka horaysa dhicista caleenta ballaaran, laakiin sidoo kale keena dhimasho.
Cudurada halista ah ee pear, gubashada bakteeriyada ayaa sidoo kale lagu xusay, ee cayayaanka, caarada galley.
Aynu bilowno xaqiiqda ah in qaybta cagaaran ee warshadu ay masuul ka tahay fotosynthesis, siday u kala horreeyaan, iyada oo aan baxo geedku ma heli karo tamarta iftiinka oo u badalida tamarta kiimikada kiimikada. Si fudud loo dhigo, geedka ma awoodi doono in uu soo celiyo walxaha adag ee laga soocay ciidda kuwa lagu nuugayo.
Sidaa darteed, qadarka kaydka ka hor xilliga jiilaalka ayaa si weyn loo yareeyey, taas oo saameynaysa adkeysiga jiilaalka iyo dhalidda mustaqbalka labadaba.
Si kastaba ha ahaatee, natiijada noocan oo kale ah looma yeeri karo kuwa ugu xun, tan iyo markii ay dhacdo guuldarro dhamaystiran ee qaybta caanaha oo dhan fungus, geedku wuu dhimanayaa, ma noolaan iyo 3 sano.
Waa muhiim! Caleemaha saameynaya waxay noqdaan kuwo laysku dhufto, dhumucdana way u dhintaan. Jilibyada ku yaala laamuhu waxay u jajabin karaan jidhka daciifka ah.
Sidaa darteed, haddii dhibco huruud ah ay ka muuqdaan caleemaha pear deriska ee deriska, macnaheedu waa inaad isla markiiba bilowdo daaweyn ama ka hortagga cudurka.
Sidee loola tacaali karaa qashinka jearka
Haddii aad ka aragto dufanka on caleemaha pear, oo aanad garanayn waxa ku samayn kiiskan, ka dibna waxaan ka wada hadli doonaa fursadaha daaweynta iyo ka hortagga cudur fangas ah.
Gooyooyinka caleemaha saameeyeen iyo caleemaha waxay ku haboontahay dhammaan marxaladaha horumarinta fungus, maaddaama aag kasta oo cudurka qabaa uu noqon doono isha lagu hayo muran cusub waqtigaas.
Ma taqaanaa? Horumarinta fangasku waxay ku dhacdaa heerar kala duwan oo heerkulkiisu yahay 3 ilaa 30 ° C iyo qoyaan qaraabo ah 85%.
Kormeerka iyo gooyaa waxay bilaabaan inay fuliyaan kahor intaan dhicin kelyaha. Ha ku xaddidn inaad ka saarto caleemaha labaad, sida fangasku si dhakhso ah u faafo. Sidaa darteed, laamaha qalfoofka ayaa sidoo kale ku xiran manjooyin. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro 7-12 cm ka hooseeya qoryaha saameeya si loo xaqiijiyo unugyo caafimaad qaba.
Ha ilaawin inaad geedi socodka jarjartid beerta beerta, dhoobada, sulphate copper ama heteroauxin.
Waa muhiim! Dhammaan qaybaha la gooyey ayaa lagu gubay meel ka baxsan goobta, iyo ciidda agagaarka geedka ku qodaya majarafadaha.
Dufanka xeyrta waa in lagu daaweeyaa kiimikooyinka, iyada oo aan taas oo aan macquul ahayn in si buuxda loo burburiyo fungus.
Biyaha ayaa inta badan la isticmaalaa. bakteeriyada ku salaysan bakteeriyada. Bordeaux dareeraha 1% waa doorasho caan ah, laakiin waxaad isticmaali kartaa daawooyinka kale ee la midka ah (Kuproksat, Kuproksil, Champion).
Doorasho kale waa kumbofullo kolloidal ah 77% ama analogues ("Kumulus DF", "Tiovit Jet"). Fungicides caadi ah, sida Fundazol, Bayleton iyo Topsin, ayaa sidoo kale ku haboon.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan cudurrada tufaaxa, miro, khudaar, baalal, canab, jiir, john, raspberries, gooseberries, currants.
Ku buufinta koowaad waa la qoraa guga hore. Si aad u qaaddo barar kelyaha. Marka xigta, qabo labaad - ka hor ubax. Daaweynta saddexaad waxaa la sameeyaa 1.5 toddobaad kadib marka labaad. Buufin ugu dambaysa waxaa la sameeyaa xilligan marka miraha yaryar ay bilaabaan inay sameeyaan. Waa in la sheegaa in daroogo kastoo loo baahan yahay in la isticmaalo ugu yaraan 4 jeer si loo gaaro maqnaanshaha buuxa ee fungus on geedka.
Dhaqanka dadweynaha Si fiican u haeynin cudurkaSi kastaba ha ahaatee, waxaa loo isticmaali karaa jabitaanka dhirta ama guuldarro jilicsan ee caleemaha. Xaaladda marka fangaska ay ku boodaan geedaha intooda badan, si ay u isticmaalaan daaweynta dad aan waxtar lahayn.
Ma taqaanaa? Waxaa jira noocyo isteroberi ah oo u adkaysta miraha: "Sugar", "Gulabi", "Sailo", "Nanaziri". Waxaa sidoo kale jira noocyo badanaa ay saameyn ku yeeshaan miraha: "Dikanka xilliga qaboobaha", "Kure", "Klapp's favorite", "Bere Ardanpon".
Faleebo qoryo qoryo ah. On 10 l oo biyo ah waxaan qaadaneynaa 0.5 kg oo ash iyo ku adkaysashada 48 saacadood. Taas ka dib, waxaan samaynaynaa waraabinta basal of pear ah. Waxaan 10 litir u leenahay geedo baaluq ah, oo aan ka badnayn 6 dadka yaryar.
Isku daadin xal xalka. Marka 10 litir oo biyo ah, waxaan qaadanaa 0.7 litir oo ah HOL, si fiican isku walaaq oo buufin qaybta dhan ee above. Daaweynta waxaa la fuliyaa xilliga dayrta, ka dib marka caleenta gebi ahaanba hoos loo dhigo. Waa in la fahamsan yahay in haddii aysan suurtagal ahayn in geedi socodka oo dhan laga shaqeeyo, wax soo saarka qayb ahaan ma soo saari doono natiijo.
Sidoo kale khatarta khuseeya marigolds iyo horsetail, taas oo lagu buufinayay qaybaha aboveeg.
Waa muhiim! Pear infected by fungus aan la quudin karaa Bacriminta nitrogen.
Waqtigaan waxaan dhajineynaa daaweynta pear ka soo miraha. Lahaanshaha dhammaan hababka lagu dagaalamo fungus, waa in la ogaadaa in fursadaha la sharaxay la isugu dari karo si loo gaaro waxtarka ugu weyn. Ha iska dhaafin cudurkan, maxaa yeelay waxay ku faafi kartaa geedka tufaaxa ama quince, ka dibna waxaad ka maqnaan doontaa geedo badan.